Ejiji 50, ngwa
Uwe nwanyi Ngwa
Ndị na-emepụta ihe dị iche iche, ndị pụrụ iche na ndị mara mma na-ewere dịka ejiji nke 5 -. Ụmụ nwanyị, ndị nwere onwe ha pụọ ​​na ahụmahụ ndị agha post-agha, mechara kwe ka ha lee anya n'ụwa, ịchọ mma na ejiji ejiji. Ha gbalịrị ilebara onwe ha anya n'ụzọ ọ bụla. Nwunye nke ndị bara ọgaranya ghaghị ịkwalite ọganihu, ha gbanwere uwe na imepụta ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Ọrụ nke nwunye ụlọ ọrụ ahụ belatara ọ bụghị nanị na ị nwere ike ịchọta onye na-ehicha ọkụ na ịsacha efere. Nwanyị ọ bụla dị mkpa ka ọ bụrụ onye zuru okè, nwee ụdị ejiji mara mma, na-ejegharị na ikiri ụkwụ ya ma jiri akwa etemeete. N'agbanyeghi na o yiri ka a na-acho, ọtụtụ ihe dị iche iche nke iri afọ ise na ọganihu gara na oge anyị.
Were, dịka ọmụmaatụ, necklaces. Ụkpụrụ a dị mkpa, ebe ejiji nke 5, ngwa ndị ahụ aghọwo ihe nlereanya nke ịdị mma na nke oge a, ọ dị mma dị iche iche na iche iche. A na-eyi akwa pel na uwe na-adị kwa ụbọchị, uwe iji pụọ n'ime ọkụ ma ọ bụ ihe omume. Otu nwere ike kwuru banyere kpochapụwo Nchikota ọla ntị (obere ihe), mgbaaka, agbụ. Ndị a esetịpụwo ewu ewu pụrụ iche na afọ 50, ma nọgide na-achọ ruo ugbu a. Taa, obere vidiyo na ọla ntị na-enweta nkwado ọ dịkarịa ala n'oge ochie. Nhọrọ ha bụ oke nnukwu, ma ụmụ nwanyị na-eji eji ejiji achọ nnukwu ihe yiri mgbaaka ma ọ bụ nke dị gburugburu n'ụdị bọtịnụ nke malachite, kristal ma ọ bụ topaz.
Okpu na uwe.
Ngwa ndị kachasị achọpụta nke afọ 50 bụ chaa na uwe. Ụdị ha dị iche iche na-ekwe ka ịhọrọ kit maka oge ọ bụla. Ọkpụkpọ ahụ bụ àgwà dị oké mkpa nke ọdịdị ọ bụla. N'inye ịma mma na ụzọ dịgasị iche iche nke edozi isi, ọkpụkpụ nwere ike ịgbanwe nha ha site na nke ọ bụla ka ọ dị ntakịrị, mgbe ọkpụkpụ ahụ gbanwere naanị ihe ịchọ mma dị ka ntụ. Ụmụ nwanyị enweghị ike inye aka ma mara na okpu a họọrọ nke ọma ga-eme ka nkwupụta ihu na-apụta ìhè ma gbakwunye anya miri emi. Ugbu a, ejiji ejiji emela ọzọ. Ụdị ụdị ejiji ndị a mara mma ọ bụghị nanị ụmụ nwanyị na-ewu ewu na ndị mara mma, kamakwa bụrụ àgwà dị mkpa nke uwe ejiji.
Akpụkpọ ụkwụ na ịcha akwa.
N'ime afọ iri ise na ise, ihe nkedo na ịcha ahụ na-ewu ewu, na-agbụ isi dị ka okpu nke na-edebe ntutu isi. O yiri ka otu nwanyị a ga-ebugharị n'ọdụ ụgbọ mmiri. Ma ọ bụrụgodị na ụgbọ ala ahụ adịghị, ọ dịghị ihe gbochiri nwanyị ahụ ka ọ ghara inwe mmetụta dị otú ahụ, dị ka à ga-asị na ọ bụ. A na-eji usoro ndị a eme ihe n'ụzọ gara nke ọma n'oge anyị. Eji ya mee ihe maka ihe okike ha, uwe ọhụrụ nke oge a na-enye ohere maka ndị inyom taa.
Egwuregwu 5 - ies, accessories have forced women to introduce into everyday and evening fashion gloves. A na-eji uwe na-acha akpụkpọ anụ mee ihe ngosi pụrụ iche nke ogologo uwe mgbede na uwe mkpịsị aka. Ka oge na-aga, ha malitere ime otu akwa ahụ dị ka uwe, na-agbakwunye otu ụdị otu akpa aka. N'oge a, ịhụ akpa ma ọ bụ gloves na ụda nke ejiji abụghị ihe siri ike, mana niile na-ekele 50th!
Laghachite n'oge gara aga na oge anyị na akwa belt ejiji, na-ejiri ha akpụkpọ ụkwụ dị mma - akpụkpọ ụkwụ ballet. Agbanye belt nwere ike imesi ike n'úkwù ma ọ bụ mee ka ihe dị iche iche dịkwuo mma. Na nke a, ụmụ nwanyị nwere ihe ịga nke ọma. A na-eyi eriri ahụ n'úkwù, ha na-ekwusi ike nke eriri ahụ, na-agbanwegharị olu ahụ n'ụzọ ziri ezi. Ha nwere ike na-eyi naanị n'elu uwe ma ọ bụ karịa cardigan eyi uwe. Oge a ga - ele uwe elu ma ọ bụ ogologo oge okpomọkụ sarafan. Ibu uwe dị otú ahụ nwere uwe mwụda ma tinye ya na uwe elu ya, ị nwere ike ịkwalite ụdọ akara aka, ọ ga-eme ka ịkwado ma zuo oke zuru ezu.
Akpụkpọ ụkwụ - ballet flats naanị si na ndọrọ n'agha nke 50, na-adọrọ mmasị ma na-eto eto n'oge a. Ha dị mfe ma dị irè. Ma ị nwere ike iyi ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile - obere mkpịsị ụkwụ, ọkpụkpụ ma ọ bụ ndị na-agba nkịtị na ndị jeans.
Na, n'ụzọ, capri pants bụ ihe ngosi na ejiji nke oge ahụ. Onye edemede ha bụ Emilia Pucci, bụ onye ndị ọkụ azụ nke agwaetiti Capri kụrụ, bụ ebe Pucci meghere ụlọ ahịa ya. Ụdị uwe ndị ahụ na-eyiri nwanyị ọ bụla nke oge a, ha ejiriwo ọnọdụ ha guzosie ike, o yikarịghị ka ọ ga - adị irè. Site na e nwere ejiji maka uwe ejiji na uwe elu, nke ndị na-efe ya na-ahụ n'anya.
Ejiji nke afọ ndị a na-anọchite anya akara ngosi nke ọmarịcha Gabrielle Chanel. Ọ bụ ya wetara ụdị ejiji dị mma nke kwesịrị ekwesị maka oge ọ bụla. Uwe ya na-emepụta ihe pụrụ iche, ma na-ejikọta ya na akpa na ngwa na ụdị bọtịnụ. Chanel kụziiri ụmụ nwanyị ka ha na-eji ejiji iji mesie ùgwù ha ike ma zoo ezughị okè ma nye ụwa obere ejiji ojii.
Otú ọ dị, azụ na ngwa ngwa. Ndị mma nke 50s anaghị anọchite anya onyinyo ha n'enweghị ugogbe anya anwụ. A na-eji nke a eme ihe ugbu a. Ọ bụ afọ a ka agba na-egbukepụ egbukepụ na ụdị okwu dị iche iche nke afọ gara aga laghachiri ụwa nke ugogbe anya maka anwụ. Nnukwu, n'ụdị okpukpu abụọ, na-eṅomi akpụkpọ anụ, nke a na-achọ mma na arches na ọbụna ihe ịchọ mma na iko, iko na-enye mmadụ n'otu n'otu ma mesie ụdị nwanyị ọ bụla.
Mkpụrụ ọzọ dị oké mkpa nke 50 - nnukwu brooches na inserts nke nkume semiprecious. Ha ka na-ahụ ebe ha nọ na jaket (jaket) nke ụmụ nwaanyị. Gbakwunye ntụnye ahụ n'akụkụ nkuku nke akwa akwa ma ọ bụ uwe elu na ọbụna na akpa, ịchafụ ma ọ bụ jeans. Tụkwasị na nke a, ụdị ejiji ugbu a na-eme ka ị ghara ijikọta ụcha nke ntụ ahụ na agba nke uwe.
Ndị na-eme ihe nkiri nke ndị dị afọ 50 na ụmụ nwanyị ha bụ ụmụ nwanyị na-emepụta ihe dị ịtụnanya nke ihe ịtụnanya na ejiji oge a. Ụwa kwadoro ha, tinye ha na teknụzụ ọhụrụ ma gosipụta ha dịka onyinye dị oké ọnụ ahịa nye ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke oge a. Naanị anyị ga-anwale onwe anyị, na-enwe obi ụtọ ma na-echeta ekele nke nwanyị 50 na nke mara mma.
Okpokoro acha nke oge okpomọkụ na Mystery Joy na-ele anya na NIKI
Nhọrọ nke ngwa nwanyi
Minodame: ngwa ahia i nwere ike ime n'enweghi 2016
Shades nke Mediterranean na ọhụrụ collection cartier
Ngwa maka uwe ejiji
Ihe ịchọ mma dị mma nke Louis vuitton: onye na-achọ ọla na-achị okooko osisi BB
Wheel nke History: a na-echefu echekwa ọla collection La Nature de Chaumet
Japanese Mayonezi: mejupụtara na uzommeputa
Uwe elu kacha mma 10 maka otu afọ ọhụrụ Afọ Ọhụrụ 2017
Ndị ọrụ Internet na-agbalị ịlụ Anastasia Volochkova
Cellulite na usoro nke ịlụ ọgụ
Olee mgbe ezi ịhụnanya mbụ ahụ bịara?
Gymnastics dị omimi maka nwata
Njirimara bara uru nke millet porridge
Àgwà kachasị mma maka ụmụ nwoke
Ugogbe anya anwụ kachasị mma nke oge mmiri-oge okpomọkụ 2016
Kedu ka ị ga-esi ghọta mmetụta gị maka nwoke
Junior Eurovision Abụọ Kọntestị: niile na-atọ ụtọ
Mmetụta Mgbagwoju Anya: Ọgwụgwọ
Ọ bara uru na-eto eto elu toro na oyi?
Kedu ka esi esi di na di di nkpa?
Uma Thurman - obi ụtọ